တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံသားကောင်းတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ ? စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ | Local Resources Centre
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံသားကောင်းတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ ? စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံသားကောင်းတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ ? စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု)
ဥရောပသမဂ္ဂမှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုး၍ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ ၊ Helvetas Myanmar, Partnership for Transparency Fund တို့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် အရပ်ဘက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမြှင့်တင်ရေးစီမံချက်မှ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံသားကောင်းတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ ? ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို Mizzima TV ရုပ်သံလိုင်းနှင့် Mizzima News In Burmese Facebook စာမျက်နှာတို့မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံသားကောင်းတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ ? စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု)ဥရောပသမဂ္ဂမှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုး၍ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ ၊ Helvetas Myanmar, Partnership for Transparency Fund တို့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် အရပ်ဘက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမြှင့်တင်ရေးစီမံချက်မှ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံသားကောင်းတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ ? ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို Mizzima TV ရုပ်သံလိုင်းနှင့် Mizzima News In Burmese Facebook စာမျက်နှာတို့မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါသည်။#Civic_Engagement#European_Union#LocalResourceCentre#Helvetas#PartnershipForTransparencyFund#STUM